DhammaWeb Audio DataBase
Wednesday, 22nd November 2017 4:08am.
S No. တရားခေါင်းစဉ် Name of Author Language Title Name of Author
1 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁) ၂၃-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 01 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
2 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂) ၂၄-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 02 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
3 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၃) ၂၅-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 03 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
4 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၄) ၂၆-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 04 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
5 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၅) ၂၇-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 05 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
6 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၆) ၂၈-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 06 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
7 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၇) ၃၀-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 07 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
8 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၈) ၃၁-၁-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 08 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
9 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၉) ၁-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 09 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
10 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၀) ၂-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 10 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
11 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၁) ၃-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 11 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
12 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၂) ၆-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 12 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
13 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၃) ၇-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 13 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
14 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၄) ၈-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 14 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
15 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၅) ၉-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 15 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
16 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၆) ၁၀-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 16 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
17 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၇) ၁၁-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 17 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
18 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၈) ၁၂-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 18 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
19 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၁၉) ၁၃-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 19 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
20 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၀) ၁၄-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 20 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
21 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၁) ၁၅-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 21 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
22 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၂) ၁၆-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 22 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
23 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၃) ၁၇-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 23 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
24 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၄) ၁၈-၂-၂၀၁၀ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ မြန်မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 24 of 25) Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa
25 မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် တရားတော် အပိုင်း(၂၅) ၁၉-၂-၂၀၁၀ အဂျန် သုစိတ္တော English Kamma And The End Of Kamma Ajahn Sucitto
26 အဂျန် သုစိတ္တော English The Unifying Factor Of The Path Ajahn Sucitto
27 သီတဂူဆရာတော်အရှင်ဥာဏိဿရ English Dhamma Lecture on Meditation Nyanissara Ashin
28 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ(၁) သီတဂူဆရာတော်အရှင်ဥာဏိဿရ English Theravada Buddhism (Part 1 of 2) Nyanissara Ashin
29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ(၂) သီတဂူဆရာတော်အရှင်ဥာဏိဿရ English Theravada Buddhism (Part2of 2) Nyanissara Ashin
30 အရှင် အရိယဓမ္မ English Theravada Perspective on the Perfections (Paramis) Ariyadhamma Ashin
. . 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . [Next] . [Last Page] 2155 entries